15,000 oo yaxaas oo ka baxsaday beer lagu xanaaneynayay dalka Koofur Afrika +(sawiro) – idalenews.com
Dadka ku nool Waqooyi Bari dalka Koofur Afrika ayaa looga digay inay dibada u soo baxaan kadib markii 15,000 yaxaasyo ah ay baxsadeen meel lagu xanaaneynayay.
Rakwena’s Zane Langman ayaa u sheegay wargeyska Beeld ee dalka Koofur Afrika inay ku guuleysteen in ay dib u soo qabtaan boqolaal ka mid ah yaxaasyada baxsaday, hase yeeshee waxa uu sheegay in kala bar yaxaasyadii baxsaday ay weli maqan yihiin.
Mr Langman ayaa sheegay in xilliyada habeenkii ay tahay xilli u sahlan in yaxaasyada la soo qabto maadaama indhaha yaxaaska haddii toosh lagu iftiimiyo ay guduud ama casaan yihiin.
Yaxaasyadan baxsaday ayaa ah nooca Nile Crocodile waana qaar hilibka cuna isla markaana illaa shan mitir uu gaarayo dhererkooda ayna socon karaan siddeed mile saacadii halka ay ka dabaalan karaan 22 mile saacadiiba.
Illaa shan boqol oo kun oo yaxaasyo ah ayaa ku jira beero lagu xanaaneeyo iyadoo yaxaas walba meel gaar ah loo dhiso si loogaga hortago in ay is dhaawacaan.